Arsenal oo xasuuq daran u geysatay kooxda Bournemouth + SAWIRO – Gool FM
Arsenal oo xasuuq daran u geysatay kooxda Bournemouth + SAWIRO
( Premier League ) 28 Feb 2019 Kooxda Arsenal ayaa guul daro xanuun badan biday kooxda Bournemouth kulan ka tirsan horyaalka Premier League , kulanka ayaana ku soo dhamaaday oo ay guushu ku raacday kooxda Arsenal .
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan kooxda Arsenala ayaana la timid labo gool bilowgii hore ee ciyaartaba .
Xiidga reer Germanay ee Mesut Ozlil ayaa durba kooxdiisa u dhaliyey gool daqiiqadii 4-aad ee ciyaarta waxaana goolkaas ka caawiyey xidiga daafaca muslimka ah ee Sead Kolasinac .
Arsenala ayaa sii laba jibaartay duulaankeeda waxaana yimid goolkii labad ee ciyaarta waxaana dhaliyey Henrikh Mkhitaryan daqiiqadii 27-aad ee ciyaarta waxaana ka caawiyey Ozil oo kulanka ka dhex muuqday .
Kooxda Bournemouth ayaa iska soo guday hal goo loo deen ah waxaana goolkaas u keenay xidigooda lagu magcaabo Lys Mousset waxaana goolkaas ka soo shaqeeyey Dan Gosling .
Qeebtii koowaad ee ciyaarta ayaa lagu kala maray Arsenal oo hogaanka ciyaarta ku heysa 2-1 balse waqti nasiino kaddib waxaa dib loo amba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan .
Arsenal ayaa heshay gool qeebtii dambe ee ciyaarta waxaana u dhaliyey Kabtankooda Laurent Koscielny waxaana goolkaas ka caawiyey Henrikh Mkhitaryan .
Daqiiqadii 59-aad ee ciyaarta Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhaliiyey goolkii afaraad ee ciyaarta waxaana caawinteeda lahaa Mkhitaryan oo ahaa shumaca garoonka .
Ugu dambeen bandhiga goolasha waxaa soo xiray Lacazette ciyaarta ayaana gabi ahaanba ku soo dhamaatay 5-1 .
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Crystal Palace Vs Manchester United